Israa’iil Maxay Ku Diidantahy In Ilhan Cumar Soo Baxdo? | Xaqiiqonews
Israa’iil Maxay Ku Diidantahy In Ilhan Cumar Soo Baxdo?
Webseetka middleeasteye ayaa warbixin ka qoray Ilhan Cumar iyo mucaaradada adag ee kala kulmeysa Israa’iil iyo qaar ka mid ah xisbiga dimuqaraadiga.
Webseetka ayaa sheegaya in tartarnka kuriga wareega shanaad ee Minisoota uu u dhaxeeya Ilhan Cumar iyo ninka ay isku xisbiga yihiin ee Milton Mo, tartanka waxaa sii fogeynaya moqfika mustaqbal ee xibiga ka leeyahy Israa’iil, iyadoo la ogyahay in Mo uu ka mid yahay xubnaha gacan saarka la leh Yahuudda.
Ilhan Cumar tan iyo 2018, waxa ay caan ka aheyd baraha bulshada iyada oo ka maid aheyd xubnihii diidana cunsuriyadda iyo sinaan la’aanta ka jirta Mareykanka, waxa kale oo ay ka mid aheyd xubnaha Kongareeska kuwaasi oo dalban jiray in Sacuuiga iyo Israa’iil lagula xisaabtamo ku tumashada xaquuqda aadanaha.
Sidoo Kale Aqri..Kaalmo Noocee Ah Ayey Israa’iil Siisay Itoobiya?
Milton Mo, ayaa Ilhan ku eedeeya in ku mashquushay dagaalka xagga Tuwiterka ee kala dhaxeeta Trump, arintaasi oo sida uu ku doodaayo aan faa’ido u laheyn dadka ay matasho, isagoo sheegay hadii la doorto in uusan caanimo raadin doonin sida Ilhan Cumar balse uu u adeegi doono deegaankii laga soo doortay.
Webseeka Midle east eye, ayaa tilmaamay in Milton Mo uusan laheyn “aragti cad”. waxa uuna had iyo jeer ku celceliya in uu u adeegi doono deegaanka laga soo doortay iyo in uusan aheyn sida Ilhan Cumar.
Midle easy eye ayaa sheegay in 20 boqolkiiba (530,000) lacagta Mo ay kaga timid shirkadaha “Nopark” iyo “pro-israel America” oo ah laba gudi kuwaasi oo u adeega danaha Israa’iil ee Mareykanka dhaxdiisa.